မဆလအစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာစံမမီသော ၁၉၈၂ခု နိုင်ငံသားဥပဒေဖြင့် ဖြေရှင်းနေသော အရေးကိစ္စ တင်ပြခြင်း … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on December 13, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← “လူမှုအဖွဲ့စည်းနှစ်ခု ပြန်လည်သင့်မြတ်အောင် ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတာလည်း အခက်အခဲပါပဲ” – U N က ရိုဟင်ဂျာလို့ ဘာကြောင့်ခေါ်သလဲ ?
Why is the Genocide against Rohingyas and Kamans Triggered Now? (An Analytical Point of View) →